सरसफाइमा ध्यान दिए धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ -केसी – Enayanepal.com
सरसफाइमा ध्यान दिए धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ -केसी
२०७३, २१ फाल्गुन शनिबार मा प्रकाशित
सुर्खेतमा जाडोयाम सुरू भएसँगै बच्चाहरू भाइरल रूघाखोकी र निमोनियाले बढी संक्रमित हुने गरेका छन् । त्यहीमा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सडकका कारणले बाटोमा धुलैधुलो हुँदा पछिल्लो समयमा भाइरलको बिरामी देखिदै आएका छन् । फेरि मौसम पनि फेरिदै छ । साधारण सावधानीले बच्चालाई भाइरल, निमोनियामाट जोगाउन सकिन्छ । तर, समयमै सावधानी नअपनाउदा निमोनियाकै कारण धेरै बच्चाहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अब बर्डफु लुजस्ता खतरानाक रोग आउने सम्भावना भएकोले त्यसबाट कसरी बच्ने र आफ ्ना साना नानीबाबुलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा ईनयाँ नेपालकर्मी नरजन तामाङले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज के.सी.सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, के.सी.सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
भाइरल भनेको के हो ?
भाइरल भनेकोचाहीँ हाम्रो शरीरमा सक्रमण गर्न एक प्रकारको किटाणु हो यो धेरै प्रजातिका हुन्छन् । धेरै प्रकारका रोग हुन्छन् । जसमध्ये प्रमुख बालबालिकाहरूमा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धीको भाइरस हुन्छन्, जुन भाइरसले निमोनिया बनाउँछ । भाइरल रूघाखोकीहरू गराउँछ । यो हाम्रो ग्यास्टो इनट्क्याक्ट, जसमा एउटा रोटा भाइरस भन्छौँ, त्यसले पखाला गराउँछ । भाइरलहरू विशेषगरेर लक्षणहरू आइसकेपछि पखाला लाग्ने, घाँटी, छातीमा समस्या भएमा श्वास– प्रश्वाससम्म लक्षण देखिने हुन्छ । विशेषगरेर भाइरलमा कन्फ्युजिङ के हुन्छ भने ज्वरो एकदम उच्च हुन्छ । हामीले टाइफाइड भनेर एन्टिबायोटिक्स बढी दिने चलन छ । त्यो गलत हो । भाइरल भएमा सामान्य सिटामोल खुवाउनुपर्छ । जीवनजल पानी खुवाउने, पानी धेरै मात्रामा खुवाउने त्यसले ठीक हुन्छ ।
भाइरल हुने प्रमुख कारणहरू के हुन सक्छ ?
प्रमुख त संक्रमण भएको हुनाले हामी जुन समाजमा बस्छौँ, त्यही समाजमा सरसफाइको कमजोरी हो । व्यक्तिगत मात्रै नभएर बाटोमा हेरौँ, नालाहरू सफा छैनन् । नालाहरूमा जताततै फोहोरै फोहोर छ । त्यही नालाबाट खानेपानीको पाइप गएको छ । त्यही नालाबाट दिसापिसाब पनि गएको छ । त्यही भएर विशेष गरेर सडकहरूको सरसफाइ नहुँदा संक्रमण हुने मूख्य कारण हुन् ।
भाइरलबाट विशेषगरी बच्न र बचाउन सकिने उपायहरू के–के छन् ?
सुर्खेतमा आजसम्म हामीहरू धेरै भाग्यमानी छाँै । अन्य सहरको जनघनत्व भन्दा सुर्खेतको जनघनत्व कम छ । भाइरल रोग अलि घनत्व धेरै भएको ठाउँमा बढी फैलिन्छ । इनफ्लु, बर्डफलू भन्छौँ त्यो भाइरल रोग हो । बर्डफ्लु सुर्खेतमा आयो भने हामी त्यति नडराए हुन्छ । किनभने सुर्खेतमा घनत्व धेरै छैन । र काठमाडौंतिरको घनत्व धेरै भएको ठाउँमा छिटो फैलने सम्भावना हुन्छ । त्यही भएर आफूलाई भाइरल भएको छ भने माक्स लगाउनु प¥यो, अनि जता पायो त्यहीँ गएर दिसापिसाब गर्नु भएन । त्यही भएर विशेषगरी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । भाइरलबाट बच्न सकिन्छ । एक प्रकारको भाइरल रोग लामखुट्टेबाट सर्छ, अहिले लामखुट्टेबाट किन सर्छ भने पहिला–पहिला लामखुट्टेबाट लाग्ने रोग सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट यो क्षेत्रमा लाग्ने थिएनन् किनभने तापक्रम कम थियो । अब ‘ग्लोबल वार्मिङ’ भयो र यहाँ पनि खतरा खालको लामखुट्टेहरू बाँच्न थाल्छन् । डेंगु, चिकेन गुनिया भयो, त्यस्तो खालको रोग भाइरल हो ।
यो मौसममा कति बालबालिकाहरू भाइरलका समस्या देखिएर उपचारमा आएका छन् ?
भाइरलका बिरामी बालबालिकाहरू धेरै छन् । अहिले पनि यो मौसममा ७५ प्रतिशत बिरामी भाइरलका छन् ।
बेलैमा उपचार नभए बच्चामा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन गम्भिर समस्या के हुन सक्छ ?
हुन सक्छ । एउटा त भाइरल सरसफाइ गरेनौँ भने भाइरल लागेको लाग्यै भयो भने बच्चाहरूलाई कुपोषण हुन्छ । अर्को बच्चाहरूको शरीर हाम्रोजस्तो पूर्ण विकसित भएको हँुदैन । विकास हुने क्रममा हुन्छन् । विकास हुने क्रममा यही भाइरल लागेर अङ्ग अलिकति गडबड ग¥यो भने त्यो अङ्गको विकास सही नभएर बाङ्गोटिङ्गो विकास हुन्छ । जस्तो फोक्सो भनौँ न, फोक्सो भनेको एक प्रकारको रोगको हाँगा पलाउने जस्तै हो । फलाईरहेको हुन्छ । कुनै भाइरल निमोनिया लाग्यो भने ति हाँगाहरू सुक्छन्, भविष्यमा गएर दम हुनेलगायत धेरै समस्याहरू हुन सक्छन् ।
यो मौसममा कसरी बचाउन सकिन्छ, उपायहरू के–के छन् ?
गर्मी समय छ । हामीहरू बाटोघाटो निर्माणमा जुटेका छौँ, धुलो बढी छ, धेरै भीडभाड ठाउँमा गएर बस्नु हुँदैन । स्वच्छ पानी पिउनु पर्छ । मान्छेहरू पृथ्वीमा आइसकेपछि मान्छेहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि पत्ता लागेको थिएन । ठूलो औषधि भनेको स्वच्छ पानी नै थियो । शुद्ध पानी खाएपछि ९० प्रतिशत रोग हराउँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर धेरै मानिसहरू बाँच्न थाले । त्यही भएर शुद्ध पानी पिउनु पर्छ । आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटसम्म उमालेको पानीलाई फिल्टरमा राखेर खानु पर्छ ।
भाइरल भन्ने रोग आमाको दूधबाट बालबालिकालाई सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ ?
आमाको दूधबाट भाइरल सर्दैन । तर आमालाई खोकी लागेको छ भने खोकीबाट, फोहोर हातबाट भाइरल सर्न सक्छ । आमाले यसको ख्याल गर्नुपर्छ, खोक्दा ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।
अबको यो मौसममा कस्तो रोग फैलिने सम्भावना हुन्छ ?
अब अलिकति डर लाग्दो भनेको बर्डफ्लु हो, अरू सामान्य रोग लगेपनि उपचार हुन्छ । यो मौसममा बर्डफ्लु आउन सक्छ । डेंगु लाग्न सक्छ । हामीहरू डराउनै पर्ने हुन्छ । डेंगु लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ । डेंगु फैलाउने लामखुट्टेले दिउँसो टोक्छ, राती टोक्दैन । हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । ज्वरो आएमा सिटामोल खुवाउनु पर्छ । त्यतिगर्दा पनि सञ्चो भएन भने डेंगु जाँच गराई हाल्नु पर्छ । सरकारले यसलाई निःशुल्क चेकजाँचको सेवा दिएको छ । हामीकहाँ जताततै छ ।
अन्तमा सुझाव, सल्लाह के दिनु हुन्छ ?
मौसम खराब छ, गर्मी बढ्दै छ । सबै जनाले अलिकति व्यक्तिगत सरसफाइमा, आफ्नो घरको सरसफाईमा अलि ध्यान दिनुप¥यो । विशेषगरी खानपिनममा स्वच्छ पानी खानुप¥यो । बासी खानेकुरा खानुभएन । पानी एकदमै शुद्ध गरेर खानुप¥यो कसैलाई रूघाखोकी लागेको छ भने अलिकति टाढा बस्नुप¥यो । सुख्खा मौसममा माक्स लगाउनु प¥यो, शुद्ध पानी एकदमै धेरै खानुप¥यो त्यही नै हो ।